ကာယဗလအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး 2,4-Dinitrophenol (DNP) အကျိုးခံစားခွင့်
/သတင္းေၾကျငာခ်က္/ပြတိုက်/ကာယဗလအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး 2,4-Dinitrophenol (DNP) အကျိုးခံစားခွင့်
အပေါ် Posted 03 / 12 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
အများစုကယှဉ်ပြိုင်ကာယဗလအမြဲသူတို့၏အလောင်းများကို၏ပိန်ကြုံမြှင့်တင်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများရှာနေတစ်ဦးအပိုဆောင်းမိုင်သွားပါ။ အလေးမအသုံးပြုသောအာဏာအရှိဆုံးမူးယစ်ဆေးတစ်ခုမှာ DNP ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါအလေးမသည်မြေကြီးပေါ်မှာအာဏာအရှိဆုံးအဆီ burner အတိုင်းဤမူးယစ်ဆေးကိုကိုးကားပါ။ ဒါကြောင့်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုအတွက်အံ့သြလောက်အောင်အစွမ်းထက်ရလဒ်များကိုထောက်ပံ့ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သည့်အရေးအပါဆုံးအရာအချို့ကဤဆောငျးပါးတှငျရှငျးပွခဲ့သကဲ့သို့ပင်, ဘာထုတ်ကုန်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်, ပါဝငျ, အကျိုးကျေးဇူးများ၎င်း၏ရလာဒ်များ, ဝက်အသက်, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၎င်း၏သောက်သုံးသောအဘယ်မှာဝယ်မှသိရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည် ။
2,4-Dinitrophenol (DNP) ကဘာလဲ?
2,4-Dinitrophenol (DNP) က၎င်း၏အံ့သြဖွယ်များအတွက်ကာယဗလအသိုင်းအဝိုင်း, ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အထွေထွေအများပြည်သူအကြားအာရုံကိုအများကြီးရရှိထားသူသောမူးယစ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်တယ် ကိုယ်အလေးချိန် ဆိုးကျိုးများ။ ဒီထုတ်ကုန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆဲလ်လူလာအသက်ရှူ၏ဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်စွမ်းနဲ့အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာထုတ်ကုန်တစ်ခုဓာတ်ပုံပြပွဲဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, ပိုးသတ်ဆေး, ဆိုးဆေး, သစ်သားဓါတ်အဖြစ်အသုံးပြုခံနေရအပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
DNP ၎င်း၏ကိုယ်အလေးချိန်သက်ရောက်မှု၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှ Maurice Tainter စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကနေသုတေသီများကယခုနှစ် 1933 အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာလူအတော်များများဟာ Diet အကူအညီအဖြစ်မူးယစ်ဆေးကိုသုံးသောဤကာလအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့သေချာပေါက်မဆိုဓါတ်ကန့်သတ်အောက်ပါမပါဘဲတဦးတည်းသီတင်းပတ်အတွင်း 3.3 ပေါင်အထိဆုံးရှုံးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေး၏တဦးတည်းဖြစ်လာလုပ် အဝလွန်မှုအတွက်ကုသလူနာများ၏အကောင်းတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုကုသရန်အသုံးပြုခဲ့သည့်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့ကိုလည်းထုတ်ကုန်ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဆေးသမားသည်ဤသက်ရောက်မှု၏အသုံးပြုသူများကသတိပေးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုတဦးတည်းတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်အခြားအထိလိမ့်မယ်။ အခြားသူများကိုပင်အသေးဆုံးဆေးများကြောင့်ထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုနေချိန်မှာဥပမာ, လူအခြို့စံထိုးသည်းခံလိမ့်မယ်။ အချို့သောအစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်အများအပြား dinitrophenol သေဆုံးမှုရှိအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့မူးယစ်ဆေး 1938 အတွက်အမေရိကန်ရဲ့အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA က) တွင်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။ 1980 ရဲ့ကကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာပြန်သောအခါသည်အထိထို့နောက်မြေအောက်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်ထုတ်လုပ်စဉ်ကတည်းကမူးယစ်ဆေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းကကျယ်ပြန့်အွန်လိုင်းရောင်းချခဲ့သည်နှင့် '' ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးများရှင်ဘုရင် '' အဖြစ်ရည်ညွှန်းခံရခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးကိုရောင်းခံရအွန်လိုင်းအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများထံမှသင့်လျော်သောလမ်းညွန်မရှိခြင်းများစွာသောအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
2,4-Dinitrophenol (DNP) အမှုန့်ကို C တစ်ဦးမော်လီကျူးပုံသေနည်းရှိပါတယ်6H4N2O5 နှင့် 184.107g / mol တစ်ဦးမော်လီကျူးအလေးချိန်။ ဒါဟာအစ Dinitrophenol Dimitrios, Dinitrenal, Nitromet နှင့် Alpha အပါအဝင်အခြားအမည်များအားဖြင့်လူသိများသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဓာတုဗေဒနှစ်ခုပုံစံများ, 2,4-Dinitrophenol နှင့်ဆိုဒီယမ် dinitrophenolate အတွက်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ 2,4-Dinitrophenol (DNP) အမှုန့်အဝါရောင်အရောင်နှငျ့အတူရှိ၏။
ဘယ်လို 2,4-Dinitrophenol (DNP) ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်အထောက်အကူပြုသလဲ
DNP ကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်းစားတဲ့အခါ, တဦးတည်းကိုမေးစေခြင်းငှါမေးခွန်းများကိုတပုံကို DNP ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဘူးပါသလဲ? ဒီမှာတစ်ခုရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် DNP ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုယန္တရား သငျသညျ 2,4-dinitrophenol (DNP) ယူသောအခါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရလဒ်များ:
သာမန်အမှုများလက်အောက်တွင်ဆဲလ်အောက်စီဂျင်၏ရှေ့တော်၌အဂလူးကို့စစားသုံးကြသည်။ ဒါက Krebs သံသရာအဖြစ်ရည်ညွှန်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များ၏ mitochondria အတွင်းရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်အဖြစ်, ပရိုတွန်တစ်ခု chemiosmotic gradient ကိုထုတ်လုပ်သည့် mitochondria ရဲ့အတွင်းစိတ်အမြှေးပါးမှတဆင့် mitochondria ရဲ့ matrix သို့ diffuse ။ ဤအပရိုတွန်ဟာ mitochondria ၏အတွင်းပိုင်းအမြှေးပါးမှတဆင့်ပြန်လွင့်မျောနေသောသောအခါဤ gradient ကိုပြီးတော့စိတ်သက်သာရာဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားပရိုတွန်ကိုသာ adenosine triphosphate (ATP) synthase အင်ဇိုင်းမှတဆင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအင်ဇိုင်းမှတဆင့်ပရိုတွန်၏ဖြတ်သန်းဆဲလ်များအတွက်စွမ်းအင်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ATP ၏ဖန်တီးမှုမှဦးဆောင်နေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်အတွင်းစွမ်းအင်တစ်ခုရေရှည်တည်တံ့ထောက်ပံ့ရေးသေချာ။
Dinitrophenol ဆက်ပြောသည်အခါက mitochondrial အတွင်းအမြှေးပါးသို့ပရိုတွန်၏မျောပြန်ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါက mitochondria ရဲ့အမြှေးပါးအကြားပရိုတွန်တစ်ခုတိုးလာအာရုံစူးစိုက်မှုစေပါတယ်။ ဒါဟာအာရုံစူးစိုက်မှုအင်ဇိုင်း ATP synthase ၏လုပ်ဆောင်ချက်တိုက်ဖျက်ရေးဦးတည်ရာ mitochondria ရဲ့ matrix ကိုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကျော်လွန်နေပါသည်။ ရလဒ်အဖြစ်စွမ်းအင်မသည်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်သိုလှောင်ထားသော ATP ထုတ်လုပ်အတွက်အသုံးပြုမပေးပါ။ ဤသည်စွမ်းအင်မဟုတ်ဘဲအပူများ form မှာစွန့်ပစ်အဖြစ်ဖြန့်ချိသည်။
အဆိုပါ DNP ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ATP ၏ရှားပါးမှုကိုဖုံးလွှမ်းရန်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုပြီးဘိုဟိုက်ဒရိတ်, ပရိုတိန်းနှင့်အဆီကိုမီးမရှို့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေပါလိမ့်မည်။ ဒီအဆီဥ, ပရိုတိန်းနှင့် carbs ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမီးရှို့ရာနေကြသည်မှာနှုန်းတိုးပွားစေပါသည်။ ဒါကလျင်မြန်စွာဆီဥနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤသည်ကိုလည်းပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းကတိုးမြှင့်, ဇီဝြဖစ်နှုန်းထားများနှုန်း၏အပြောင်းအလဲတချို့စေပါတယ်။ ဇီဝြဖစ်၏တိုးပွားလာမှုနှုန်းနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်မြန်မြန် Fats နှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်လောင်ကျွမ်း။
DNP ဒါ့အပြင်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ထိရောက်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ဤသည် uncoupling အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို, ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်အတွင်းအပူများထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်ထက်အဆီနှင့်အဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုပိုမိုဆင်းချိုးတော်မူ၏။ ဒါဟာဇီဝြဖစ်နှုန်းမှာရာခိုင်နှုန်း 50 သကဲ့သို့မြင့်မားသောမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ DNP သောက်သုံးသောအောက်ရှိတစ်ဦးချင်းစီ, ဒါကြောင့်, ကိုယ်အလေးချိန်မှာများစွာသောသဘောတူညီချက်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် DNP တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမဆိုဓါတ်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
အဆိုပါကာယဗလလည်း၎င်းတို့၏တစ်ဦးဖြည့်စွက်အဖြစ် DNP သုံးစွဲဖို့သိ ကာယဗလ လေ့ကျင့်ရေး။ အဆိုပါမူလတန်းအကြောင်းပြချက် DNP ကာယဗလ function ကိုအလွန်အကျွံအဆီနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ DNP ဟာကာယဗလတစ်ဦးချင်းစီများအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်အထောက်အကူပြုကြောင်းအများကြီးအားသာချက်ရှိပါတယ်။ အောက်ပါသည်ဤအားသာချက်များတချို့ရှိနေပါတယ်။
အဆိုပါ DNP အရှင်ဇီဝြဖစ်၏နှုန်းတိုးမြှင့်သည့် oxidative phosphorylation ၏ disassociation လှုံ့ဆော်။
ဒါဟာဆဲလ်တွေပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါက ATP တစ်လျှော့ချပမာဏကိုထုတ်လုပ်သည် DNP ထိတွေ့သောအခါများတွင်ဆဲလ်တွေထုတ်လုပ် ATP ပမာဏကိုသာသက်ရောက်သည်။ တိုးမြှင့်ဇီဝြဖစ်အတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကိုတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့, ခန္ဓာကိုယ်ကပို ATP ထုတ်လုပ်ဖို့ဖိအားအောက်၌ဖုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီထက် ATP ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ခန္ဓာကိုယ်အဘို့, ပရိုတွန် '' လြှပျစစျ gradient ကိုတစ်ခုအပြောင်းအလဲတချို့ရှိပါတယ်။ ဤသည် ATP များ၏ပေါင်းစပ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်ကိုအပူအဖြစ်၏စွန့်ပစ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပိုလျှံပြည်တွင်းရေးအပူထုတ်လုပ်သည့်အခါ, ကယ်လိုရီတွေအများကြီးကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ရရှိလာတဲ့ကိုလောင်နေကြသည်။
DNP ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်းဂလူးကို့စပြိုကွဲ (glycolysis) အတွက်တိုးမြှင့်ဆယ်လူလာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှိုးဆွနေသည်။
glycolysis uncoupling နှင့်တိုးပွားလာ၏တားစီး၏လုပ်ငန်းစဉ်များပေါင်းစပ်သောအခါ, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေအများကြီးကိုလောင်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များနောက်ဆုံးမှာအလေးချိန်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဦးတည်သွားစေရာ, စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လျော့နည်းသွားထိရောက်မှုမှု။
ဒီသေးလူသားတွေနေဖြင့်အလေ့အကျင့်ထဲသို့သွင်းထားရသေးသော်လည်းသုတေသန DNP အလားအလာသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့သိသိသာသာဒြပ်ပေါင်းများကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သုတေသနမူးယစ်ဆေး့လေဖြတ်ခြင်းမှခံစားခဲ့ကြရသည်သူတွေကိုကုသပေးနေအတှကျအသုံးပွုနိုငျသောပြသခဲ့သည်။ ကလေဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ပြန်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်း Huntington ရဲ့ရောဂါခံစားနေရပြီးလူနာအတွက် oxidative စိတ်ဖိစီးမှုတန်ပြန်ရန်အလားအလာရှိပါတယ်။ ဤသည် DNP ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်တိုးမြှင့်မော်တာ function ကိုဖွင့်ထားပါသည်။
DNP Steroid တစ်မျိုးလည်းပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာကုသမှုများအတွက်ဆေးပညာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
က Huntington ရဲ့ရောဂါအဘို့အလည်ပတ်သောသကဲ့သို့ DNP မော်တာ function ကို၏တိုးမြှင့်အတွက်ကူညီပေးသည်နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသို့သော်နောက်ထပ်သုတေသနဘို့လိုအပ်ကြောင်းများအတွက်လူသားများအတွက်လျှောက်ထားကြပြီမဟုတ်။
Diet အောက်မှာလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်များအတွက်တစ်ဦးအကူအညီအဖြစ် DNP ဖြည့်စွက်သုံးနိုင်ပါသည်။
သင်အစာစားမည်သို့ဆိုစည်းမျဉ်းများမလိုအပ်ပါဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်အများကြီးစားနေတုန်းပဲအလေးချိန်အရှုံး၌သင်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးလည်းတစ်ဦးအဖြစ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်း.
ဤအခြေအနေမှထိုကဲ့သို့ကင်ဆာကဲ့သို့အခြားအန္တရာယ်ရှိသောရောဂါများဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။ သုတေသနသို့သော်ကြွက်၌ဤရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး DNP အချို့အလားအလာစွမ်းရည်များကိုပြသထားသည်။
ဆီးချိုရောဂါအင်ဆူလင်ကိုခုခံခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ အင်ဆူလင်ကိုခုခံနှင့်တကွ, သကြားကိုထိန်းချုပ်ဟော်မုန်းဖို့ဆဲလ်များ၏ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆဲလ်ထဲမှာသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်အတွက်မညီမညာဖြစ်နေသောကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ DNP ဆဲလ်ထဲမှာအင်ဆူလင်ဖို့ sensitivity ကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဤသည်ဆီးချိုရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်။
ဒါကဥပမာ, တစ်ဦးပြပွဲအဘို့ကြီးစွာသောပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည်ဖို့ရှာနေသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာဖြေရှင်းချက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် DNP အောက်မှာအခါ, က DNP အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးစွမ်းအင်လိုငွေပြမှုကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ရန်အတွက်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သိမ်းဆည်းထားအဆီသုံးစွဲဖို့အတင်းအကျပ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျယူအစားအစာတာမဟုတ်အဆီသိုလှောင်မှုကိုအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးစွမ်းအင်လိုအပ်သည်အခါသင်, ဒါကြောင့်, ပိုပြီးအဆီရှုံးသည်။ အတော်များများကကာယဗလအတွက်သုံးပြီးပြီးနောက်အောင်မြင်သောထောက်ခံစာအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ DNP အဆီ burner.
ကြောင့် Dinitrophenol ကိုယ်အလေးချိန်သက်ရောက်မှုများနှင့်အဆီကိုမီးမရှို့ရန်စွမ်းရည်ကို၎င်းထိုသို့အဝလွန်ခြင်း-related အခြေအနေများနှင့်အတူလူပြုမူဆက်ဆံရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒီအကြောင်းအားသာချက်ကစနစ်တကျအသုံးပြုသည်ဆိုပါကအခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမထိခိုက်စေဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါတိုးမြှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းမှာအရှင်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်စေတဲ့ကယ်လိုရီ၏ကြီးမြတ်စားသုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအသိုင်းရွိုက်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတူညီသောလမ်းလည်ပတ်သော။
DNP ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကာယဗလအတွက်အသုံးပြုအထိရောက်ဆုံးဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်ဦးအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါသည်။ ဤသည်, သို့သော်, DNP ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အန္တရာယ်တွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ကောင်းစွာအသိပေးနှင့်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူများသည်လိုအပ်သည်။ DNP ကာယဗလနှင့် DNP ကိုယ်အလေးချိန်ရလဒ်များကိုအလွန်တိုတောင်းသောကြိမ်အတွင်းကအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများနှင့်အတူအမှုဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, အသုံးပြုသူအချို့ဆိုတိကျတဲ့အစားအစာသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းမရှိဘဲတစ်ဆယ်ရက်အတွင်း 6kgs အထိဆုံးရှုံးခဲ့ရဘဲလျက်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ ဤသည်ခန္ဓာကိုယ်အဆီအပေါ်% အရှုံး 20 အထိဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။
ရလဒ်များကိုမီနှင့်အပြီး DNP ကိုရှာဖွေနေစဉ်, အဲဒါကိုလူအားလုံးတို့အတွက်တူညီသောလမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူးသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့်ပင်နိမ့်ဆုံး DNP ဆေးများနှင့်အတူအခြားလူမှဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုရှိစေခြင်းငှါအနေဖြင့်အချို့လူများ, ထုတ်ကုန်ပုံမှန်ဆေးများအောက်မှာကူညီပေးပါမည်။
သငျ့လျြောသော DNP သောက်သုံးသောနှင့်အတူ, သငျသညျအလွန်အထင်ကြီးရှိနိုင်ပါသည် DNP မူးယစ်ဆေးမီနှင့် ရလဒ်တွေကိုအပြီး။ ကိစ္စအများစုတွင်, ကာယဗလ5နှင့် 15pounds အကြားဆုံးရှုံးရ။ အားသာချက် DNP ကိုယ်အလေးချိန်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကနေအပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်များကလိုက်ပါသွားသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သောရေ retention ကိုရှိစေခြင်းငှါသော်လည်း, ဤရေဆေးထိုးပျစဲပြီးနောက်ချွတ်သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါ DNP သံသရာစဉ်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်သံသရာအပေါ်အနေဖြင့်ခက်ခဲအတိအကျအလေးချိန်အရှုံးတွက်ချက်ရန်အောင်, ရေ retention ကိုအားဖြင့်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်နိုင်ပါသည်။ ပို့စ် DNP သံသရာအတွင်းထိန်းသိမ်းထားရေကိုချွတ်သွန်းလောင်းသည်တ DNP Steroid တစ်မျိုးအပေါ်ကာလအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့အတိအကျအလေးချိန်ရေတွက်လို့ရပါတယ်။ သံသရာအပေါ်နေစဉ်တိုးမြှင့်အပူထုတ်လုပ်မှုသငျသညျအငတ်ခြင်းနှင့်ချွေးတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ခံစားမှုပေးသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရေတာကိုစောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးပေသည်။ တချို့လူတွေကချွေးအနည်းငယ်နှောင့်အယှက်များနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းကအားလပ်ရက်နှင့်ဆောင်းရာသီလအတွင်းသံသရာတာကိုလိုလားကြပါတယ်။
DNP လည်းဂလူးကို့စ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး upregulate မှခန္ဓာကိုယ်တွန်းအားပေးသော ATP က uncoupling မှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဂလူးကို့စအဘို့အမြင့်မားဝယ်လိုအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကကိုယ်အလေးချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
တချို့လူတွေကတိုးတက်စေရန်အင်ဆူလင်နှင့်အတူ DNP သီးနှံများကိုပုံပါဘူး DNP ကိုယ်အလေးချိန်ရလဒ်များကို။ အင်ဆူလင်တိုးအကြီးအကျယ်ဂလူးကို့စများ၏လွှာမှကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကို
အဝလွန်ခြင်းဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူပြည်သူ့ကိုလည်း DNP ကိုယ်အလေးချိန်အချိန်ဇယားအောက်တွင်သူတို့၏အခြေအနေအချို့သိသာသောအပြောင်းအလဲနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ စံကုထုံးဆေးများလက်အောက်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝြဖစ်မှုနှုန်းအနည်းငယ်မျှသာသို့မဟုတ်လုံးဝမအဆိပ်အတောက်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူပုံမှန်နှစ်ဆအထိမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ဤသည်မှာအရှင်အဝလွန်ခြင်းကိုလျှော့ချလျင်မြန်စွာအဆီလည်းမီးလောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အပြင်အဆီနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကနေ DNP ကိုလည်း၏လျှော့ချရေးအပါအဝင်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် T3။ သင်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်ဟိုသံသရာအောက်မှာလျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ T3 ဟာ DNP သံသရာပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါအရာ catabolic ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ တစ်ချိန်ချိန်, အ DNP အလွန်နိမ့်ဖြစ်စေ, အကောင်းဆုံးအဆင့်ဆင့်ကိုအောက်တွင်ဖို့ T3 အဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချစေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင်သည်သင်၏သံသရာအတွက် T3 အချို့ကိုသေးငယ်တဲ့ဆေးများသီးနှံများကိုပုံမှလိုအပ်နိုင်ပါသည်
DNP လည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးထက်ပိုပိန်ကြုံခြင်းနှင့်ဟိုပုံသို့သင့်ရဲ့ကြည့်တိုးတက်ကောင်းမွန်သည့်ဟိုပြန်တက်ပေးသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကပိုကောင်းစေပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော steroids အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆက်ဆံသောအခါ, ဝက်ဘဝသတင်းအချက်အလက်များအလွန်အရေးပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏တစ်ဦးကဝက်ဘဝစနစ်ကနေမူးယစ်ဆေးဝါး၏ထက်ဝက်ပပျောက်ဖို့ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့သိမ်းယူကာလဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတစျနာရီတစ်ဝက်ဘဝနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ 100mg ယူလျှင်ဥပမာ,, ကသင့်ရဲ့ system ကိုတစ်နာရီပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ 50mg ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးထို့ကြောင့်လုံးဝ system ထဲကနေဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်2နာရီကိုယူပါလိမ့်မယ်။
DNP Steroid တစ်မျိုး 36 နာရီမှတက်ဘို့ကြာရှည်ကြာမြင့်စွာဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ DNP ဝက်ဘဝကိုတစ်စုံတစ်ယောက်က 100mg တစ်ထိုးကြာလျှင်, ခန္ဓာကိုယ်နေဆဲအခြား 50 နာရီပြီးနောက်သောက်သုံးသောနှင့် 36mg ပြီးနောက် 25mg 36 နာရီရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ လုံးဝဖျက်သိမ်းခံရဖို့မူးယစ်ဆေးသည်နာရီ 252 အထိကြာလိမ့်မည်။
အဆိုပါ DNP တစ်ဝက်ဘဝသတင်းအချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာသင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းအခြိနျဇယား၌သင်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးရှိခြင်းနှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကရှည်လျားသံသရာနှင့်အတူအနိမ့်ဆေးများယူအကြံပြုချက်များဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ, တဦးတည်းတစ်နေ့လျှင် 25mg တစ်ထိုးမှာ DNP အဆီ burner ဆေးပြားတစ် 40 ရက်ပေါင်းသံသရာယူနိုင်ဘူး။
ဒါဟာကြောင့်ရှည်လျားတစ်ဝက်-life, သွေးထဲတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးပမာဏသငျသညျသစ်တစ်ခုထိုးယူအခါတိုင်းတိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤရွေ့ကားပြင်းအားမျှော်လင့်မထားတဲ့အဆင့်မြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ဒါက DNP တစ်ဝက်ဘဝအကြောင်းကိုသိသောပညာကိုတစ်ဦး DNP ကာယဗလသံသရာမယူမီသိရန်အရေးပါသောအရာသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ DNP ၏ထိန်းအကွပ်မဲ့ပြင်းအားရှောင်ရှားရန်သင့်လျော်စွာအဆိုပါသောက်သုံးသောအချိန်ကူညီပေးသည်။
ဒါကြောင့် DNP သောက်သုံးသောမှကြွလာသည့်အခါတစ်ဦးအလွန်သတိထားပါနှင့်ကောငျးစှာအကြံပြုထားတဲ့သောက်သုံးသောနောက်လိုက်ဖို့ထင်နေသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးထိန်းအကွပ်မဲ့သောက်သုံးသောအတွက် DNP ယူဆိုးဝါးဖြစ်နိုင်သည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံသည့် DNP သေဆုံးမှုအချို့တို့သည်မူးယစ်ဆေး overdosing ၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ သေခြင်းဆီသို့ဦးတည်အတိအကျကိုအဘယျသို့ထိုးလူသိများရသေးသော်လည်း, ခန့်မှန်းချက် 2500mg ထက်ကျော်လွန်တဲ့သောက်သုံးသောဆိုးဝါးစေခြင်းငှါကြပြီ။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရှည်လျားသံသရာနှင့်အတူအသေးစားဆေးညွှန်းကိုယူပြီး DNP ထိုးဖို့အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ DNP တစ်ဝက်ဘဝဤမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကမူးယစ်ဆေးစနစ်ကနေကိုရှင်းလင်းမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူဆိုလိုသည်။ သို့ဖြစ်. ရုံသင်အကြံပြုထိုးခြင်းထက်ပိုပြီးကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဟုမယူဆသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ DNP သောက်သုံးသောစဉ်အတွင်းကြောင့်အရက်ကိုရှောင်ရှားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ DNP တစ်ဦးချင်းပေါ် မူတည်. မတူညီနည်းလမ်းတွေအတွက်၎င်း၏ရလာဒ်များထားပါတယ်။ သငျသညျကအလုပ်မလုပ်ကြောင်းကိုသိခံစားရမပြုရပါ။
မူးယစ်ဆေးဖို့သည်းခံစိတ်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးချင်းစီအတိုသံသရာနှင့်အတူရှည်လျားသောသံသရာသို့မဟုတ်မြင့်မားသောဆေးများနှင့်အတူအနိမ့်ဆေးများယူရန်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ဥပမာ, ရှည်လျားသောသံသရာနဲ့အနိမ့်ထိုးဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ:
ကို DAYS DNP
1 တစ်နေ့လျှင် 200mg
2 တစ်နေ့လျှင် 200mg
3 တစ်နေ့လျှင် 200mg
4 တစ်နေ့လျှင် 200mg
5 တစ်နေ့လျှင် 200mg
6 တစ်နေ့လျှင် 200mg
7 တစ်နေ့လျှင် 200mg
8 တစ်နေ့လျှင် 200mg
9 တစ်နေ့လျှင် 200mg
10 တစ်နေ့လျှင် 200mg
11 တစ်နေ့လျှင် 200mg
12 တစ်နေ့လျှင် 200mg
13 တစ်နေ့လျှင် 200mg
14 တစ်နေ့လျှင် 200mg
15 တစ်နေ့လျှင် 200mg
16 တစ်နေ့လျှင် 200mg
17 တစ်နေ့လျှင် 200mg
18 တစ်နေ့လျှင် 200mg
19 တစ်နေ့လျှင် 200mg
20 တစ်နေ့လျှင် 200mg
21 တစ်နေ့လျှင် 200mg
သောက်သုံးသောဒီလိုမျိုးခုနှစ်, သငျသညျပြုလုပ်ခြင်းသည်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအတွက်မူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးရပါမည်။ အကြောင်း, ညဦးယံ၌နံနက်ယံ၌ 100mg နှင့် 100mg ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသင်တို့အားရှေ့ဦးစွာဓာတ်မတည်သို့မဟုတ်အဆိပ်ရလဒ်များကိုရှိပါကဆုံးဖြတ်ရန်ပထမဦးဆုံးတိုင်အောင်တဆယ်လေး (14) နေ့ရက်ကာလအဘို့သံသရာကို run သငျ့သညျ။ ဝါရင့်အသုံးပြုသူများအတွက်, တသုံးပတ် (21 ရက်ပေါင်း) ကိုဆက်လက်စေသော။
5 တစ်နေ့လျှင် 400mg
6 တစ်နေ့လျှင် 400mg
7 တစ်နေ့လျှင် 400mg
8 တစ်နေ့လျှင် 400mg
9 တစ်နေ့လျှင် 400mg
10 တစ်နေ့လျှင် 400mg
11 တစ်နေ့လျှင် 400mg
ထိုကဲ့သို့သောသံသရာများအတွက်သောက်သုံးသောပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌, (ညဦးယံ၌နံနက်ယံ၌ 200mg နှင့် 100mg အဖြစ်ကိုခှဲဝေ) တစ်နေ့လျှင် 100mg ၏သေးငယ်တဲ့ဆေးထိုးနဲ့စတင်ရပါမည်။ သို့သော်ဝါရင့်သည်အသုံးပြုသူများမှဆုံးဖြတ်မသောက်သုံးသောသို့မဟုတ်သံသရာအတွက်ကာလ၏အရေအတွက်ကိုတိုးစေနိုင်သည်။
DNP ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးပြားအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အထိရောက်ဆုံးအေးဂျင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေစဉ်တွင်, ကလည်းအချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အစွန်းရောက် DNP ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာအလွန်အန္တရာယ်များဖြစ်နှင့်လူ့အသက်ကိုရစေခြင်းလေးနက်အန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုး minimize လုပ်ဖို့ DNP ကိုယ်အလေးချိန်ဆေးပြားယူပိုလုံခြုံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အောက်ပါနှင့်အတူဆက်စပ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုများမှာ 2,4-dinitrophenol (DNP):
DNP အပေါင်းတို့သည်အသုံးပြုသူများအား၎င်းတို့၏ခန္ဒာကိုယ်ထဲတွင်တစ်ခုအလွန်အကျွံအပူထုတ်လုပ်မှုခံစားရသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအလွန်မသက်မသာပြည်နယ်ပေးခြင်းပုံမှန်အထက်မြင့်တက်။
DNP ဟာ ATP တွေပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကတည်းကခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်မပါဘဲကျန်ရစ်ရ၏။ ဤသည် lethargy ၏ခံစားချက်တိုးပွါးနှငျ့သငျဆိုရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်အားနည်းခံစားရတယ်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အတိုင်းအတာကိုသင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယူ DNP ဓာတု၏ပမာဏအပေါ်မူတည်သော်လည်းအချို့သောလူတွေက bedridden ဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦးပွိုင့်မှအစွန်းရောက် lethargy နိုင်ပါသည်။ သူတို့ပင်ကိုစားနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်မှာတဦးတည်းဆေးထိုးနှင့်အတူဆက်လက်မပြုလုပ်သင့်။ Lethargy ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားပြဿနာများနှင့်အတူလိုက်ပါသွားနိုင်ပါသည်။
ရေ retention ကို
DNP ရေ retention ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူ overproduction ၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အပူထုတ်လုပ်မှုအလှည့်အတွက်သွေးကြောများ၏တိုးချဲ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရာ vasodilation စေပါတယ်။ သွေးကြောများ၏တိုးချဲ့သွေးစီးဆင်းမှု၏အသံအတိုးအကျယ်တိုးပွားစေပါသည်။ ဤသည်ကိုလည်းရေ retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သွေးကြောများ၏တိုးချဲ့မှုကိုလည်းသွေးဖိအားလျော့နည်းစေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကပိုရေ retention ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောရလဒ်အဖြစ်ကပိုကယ်လစီယမ်သိုလှောင်ပါသည်။ ဤရေကြွက်သားဖောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါ Diuretics ဆီးလှည့ ်. ရေလုံလောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုပူဇော်ကြပါဘူးကတည်းကအစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်ပါကပိုတက်စီယမ်တွေပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကသေဆုံးနိုင်ခြေမှာအသုံးပြုသူထားနိုငျသညျ။
ရေဓါတ်ခန်းခြောက်အရှိဆုံးလေးနက် DNP ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ DNP သောက်သုံးသောအောက်မှာပြည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ရေအဆက်မပြတ်ရှားပါးမှုကြုံတွေ့ရပါသည်။ အဆိုပါအသုံးပြုသူများအထို့ကြောင့်ဆေးထိုးပေါ်ရေနေချိန်မှာအများကြီးယူရန်အကြံပြုပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ရေကအရမ်းနိမ့်အဆင့်ဆင့်အသေခံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်အပူအဘို့အအားနည်းချက်ခန္ဓာကိုယ်ထားစေခြင်းငှါထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
DNP အသုံးပြုသူတစ်ဦးကကောင်းသောရာခိုင်နှုန်း DNP အဆီ burner ဆေးပြားများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ဦးအဖြစ်ပျို့ခံစားရသည်။ ဤသည် Electrolyte တွေမညီမျှမှု, သွေးထဲတွင်အနိမ့်သော pH များနှင့်အခြားအကြောင်းတရားများအကြားရေဓါတ်ခန်းခြောက်အပါအဝင်များစွာသောအမှုအရာအားဖြင့်ရလဒ်နိုငျသညျ။
DNP အလွန်အကျွံချွေးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်ကတည်းကရေနှင့်ဆားတွေအများကြီးချွေးမှတဆင့်ပျောက်ဆုံးသွားနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ရေကိုသာပေမယ့်မဆားအစားထိုးကတည်းကရေများများယူပြီးအပြည့်အဝထောကျအကူပွုမဖွစျနိုငျသညျ။ အသုံးပြုသူများထို့ကြောင့်ဒီတစ်ဆေးတစ်လက်အဖြစ် v8 သီးဖျော်ရည်ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
ဝမ်းလျှောခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဆား၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ အဆိုပါ undissolved DNP ကြီးများအူသို့ရောက်ရှိအပေါ်သို့ osmotic မညီမျှမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသည် DNP အသုံးပြုသူများသည်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားမှုတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အခြားအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်မတည်များ၏အမှုများကိုရှားပါးသော်လည်း, သူတို့သည်နေဆဲအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကိုထင်ရှားစွာပြ။ အချို့လူများကထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ထည်ပတ်ပတ်လည်အဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင် Phantom ယားယံတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ အဆိုပါယားယံနောက်ဆုံးမှာ, မျက်နှာတဝိုက်အဖုသို့အခြားအစိတ်အပိုင်းများကြားတွင်နှုတ်ခမ်းကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ ဓာတ်မတည်ကြုံနေရပြည်သူ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုက်ဖျက်ဖို့ပုရွက်ဆိတ်-ဓာတ်မတည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဝယ်စေနိုင်သည်။ အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်တဦးတည်းသံသရာကိုရပ်တန့်သင့်တယ်ဘယ်မှာလျှင် DNP ဓာတုဓာတ်မတည်အများစုဟာသို့သော်ခံသာဖြစ်ကြသည်။
သူတို့တစ်တွေအဖြူရောင်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလွန်ရှားပါးကိစ္စများတွင် DNP ဆေးဝါးအောက်တွင်အချို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအဝါရောင်အစက်အပြောက်မြင်ရလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုထပ်မံသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူးနှငျ့သငျ DNP ကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းပြီးနောက်ဆက်လက်မထားဘူး။
အခြားအ DNP ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုအောက်ပါပါဝင်နိုင်ပါသည်:
DNP ယူကဘေးကင်းလုံခြုံ Is
DNP လူ့စားသုံးမှုများအတွက်တရားမဝင်အဖြစ်မှတ်သားထားပြီးသော်လည်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လက်ရှိအများဆုံးဖြစ်ပွားမူးယစ်ဆေးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကကိုယ်အလေးချိန်သက်ရောက်မှုမှကြွလာသောအခါအဘယ်သူမျှမကအခြားမူးယစ်ဆေးကြောင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်စနစ်တကျအသုံးမပါလျှင်, ဒီပင်သေခြင်းသို့ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ကိုအန္တရာယ်အရှိဆုံးမူးယစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးနီးပါးဟာ DNP အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ခန္ဒာကိုယ်ထဲတွင်အပူထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခံစားရသည်။ ဤသည်အလွန်အကျွံချွေးစေပါတယ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, ဒီမူးယစ်ဆေးထိုကဲ့သို့သောအသည်း, ကျောက်ကပ်အဖြစ်အချို့သောအရေးကြီးသောခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
သငျသညျ DNP ထိုးသို့မဟုတ်သံသရာအပေါ်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်နှစ်သိမ့်တိုးတက်စေရန်အဘို့, ဒီမှာအကြောင်းကိုအချို့သောအကြံပေးချက်များများမှာ DNP ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လို သင်အမြဲအတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်:
အစားအသောက်သင့်ရဲ့အစာအိမ်အချည်းနှီးလျှင် -You DNP ယူဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ ဘလူးဘယ်ရီဒိန်ချဉ်တို့ပါဝင်သည် DNP အပေါ်နေချိန်မှာသင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာပါဝင်သည်ဖို့အကြံပြုတဲ့အစားအစာအချို့မှာ။ yoghourt အစာခြေအတွက်ကူညီပေးသည်စဉ်ဤ blueberries ကြောင့်တစ်ဦးဓါတ်တိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒါ့အပြင်မြင့်မားတဲ့ဖိုင်ဘာနှင့်အတူအစားအစာများကိုယူပါ။
အနိမ့်ကနဦးဆေးညွှန်း- အမြဲတမ်းဥပမာ, သေးငယ်တဲ့ဆေးထိုးနှင့်သင်၏သံသရာ၏ပထမဦးဆုံးရက်ပေါင်းတစ်နေ့လျှင် 200mg သင့်ရဲ့သံသရာကိုစတင်ပါ။ သင်သည်တစုံတခုကိုမခံစားရဘူးတောင်မှအခါ, အဲဒါကိုအနိမ့် DNP ထိုးအပေါ်သင်၏ပဌမလေးရက်ကြာမြင့်စွာ DNP တစ်ဝက်ရှိပြီးကတည်းကကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိကွောငျးကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်သင်မူးယစ်ဆေးဖို့ဘယ်လောက်ခံသာစမ်းသပ်ဖို့သငျသညျကို enable ပါလိမ့်မယ်။
DNP ကိုယူပြီးစဉ်ကအခြားဖြည့်စွက် Include။ ထိုကဲ့သို့သော ECA အဖြစ်ဖြည့်စွက်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုမြှင့်တင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအစထိုကဲ့သို့သောအာလဖ Lipoic အက်ဆစ် (အဆီနှင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်၏အကူအညီအထောက်အပံ့များစီမံခန့်ခွဲမှု), စပျစ်သီးကိုအမြိုးအနှယျထုတ်ယူ, အသီးအနှံ, အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်, trimethylglycine နှင့်ဗီတာမင် C နှင့်အီးအဖြစ် antioxidants သုံးစွဲဖို့လိုအပ်သည့်ဖြစ်နိုင်သည်
သင် DNP သံသရာစဉ်အတွင်းလုံလောက်အောင်ရေတာဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။DNP ကြောင့်အလွန်အကျွံချွေးမှအများအားဖြင့်ရေငတ် induces ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင် DNP သံသရာစဉ်အတွင်းလေ့ကျင့်ခန်းရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျ 400mg တစ်သောက်သုံးသောယူပြီးနှင့်အထက်ရှိပါသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, အသငျသညျအနိမ့်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းစောင့်ရှောက်သောအာမခံပါသည်။
အမြဲတမ်း DNP နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားအပြန်အလှန်သိရန်သုတေသနပြုလုပ်ပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆေးဝါးအပေါ်များမှာအမှု၌သင်တို့၏သံသရာစီမံခန့်ခွဲရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
သငျသညျ DNP အပေါ်လုံခြုံဖြစ်ကြ၏, သငျသညျကိုစနစ်တကျမူးယစ်ဆေးထိုးဖို့ဘယ်လိုသိကြရပေမည်။ သင်တို့သည်လည်း 1gram ဖို့သောက်သုံးသော overdose သို့မဟုတ်ကျော်လွန်ဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ ထိုသို့သောသောက်သုံးသောအလွန်ဆိုးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာသင်မူးယစ်ဆေးထံမှရအကျိုးကျေးဇူးများနှငျ့သငျဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်နေသောအန္တရာယ်များကြားကချိန်ရပါမည်။
အဘယ်မှာရှိ DNP ကိုဝယ်ခြင်းငှါ
ဒါကြောင့် DNP အဆီ burner ဆေးပြားဝယ်ယူလာသည့်အခါကမူးယစ်ဆေးဝါးအချို့နိုင်ငံများအတွက်တရားမဝင်မှတ်သားထားပြီးသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့စက်မှုဇုန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မူးယစ်ဆေးရောင်းဖို့တရားမဝင်မဟုတ်ပါဘူးကြောင့် (CAS number ကို DNP အောက်တွင်အချို့သောကုမ္ပဏီများကရောင်းချ51-28-5).
DNP ၏ရရှိမှုအချို့သောအရပ်တွင်ကန့်သတ်ထားစေခြင်းငှါနေချိန်မှာသူတို့ကအွန်လိုင်းစျေးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ကတည်းကကြောင့် DNP ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများဒီထုတ်ကုန်ရောင်းစားသောဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်တည်ရှိ။ သငျသညျရောင်းရန် DNP ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်ရနိုင်ရှိရာဤဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းသောဥပမာဖြစ်ပါတယ် AASraw.
ကမူးယစ်ဆေးရောင်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေလျော့နည်းအချိန်ယူကတည်းက DNP အမှုန့်အွန်လိုင်း၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါအာနိသင်နှင့် DNP အဆီဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆက်စပ်အန္တရာယ်များစဉ်းစား, တဦးတည်းအွန်လိုင်းဒီထုတ်ကုန်ဝယ်ယူသည့်အခါအလွန်သတိထားပါရန်လိုအပ်ပါသည်။ အွန်လိုင်း DNP အမှုန့်ကိုဝယ်လိမ်လည်မှုနဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါသင်အတု DNP ကိုဝယ်ယူတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ, ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းရောင်းချရန် DNP နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခါရောင်းသူအသုံးပြုတဲ့ synonym တွေဟာနားလည်ရပေမည်။ အွန်လိုင်း DNP အမှုန့်ဝယ်ယူ၏အားသာချက်ကမူးယစ်ဆေးတစ်ခုကအရမ်းအဆင်ပြေအရင်းအမြစ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းရောင်းသူအချို့သည်ဖောက်သည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုပါလိမ့်မယ်။ သူတို့သည်သင့်ကိုအခြားအသုံးပြုသူများထုတ်ကုန်ဒါမှမဟုတ်ရောင်းသူသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းကိုခံစားနေကြပုံကိုသိကူညီပေးပါမည်ကဲ့သို့ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, သင့်သုတေသနအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သတင်းအချက်အလက်ဒီလိုမျိုးနှင့်အတူ, သငျသညျရောင်းရန် DNP အမှုန့်များ၏အခြားအသုံးပြုသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ သင်အွန်လိုင်း DNP အမှုန့်ကိုဝယ်ချင်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတူသင်တစ်ဦးအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်စေနိုင်သည်။
DNP ဟာကာယဗလအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောလူများ, အားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုတဲ့အများဆုံးဖြစ်ပွားထုတ်ကုန်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စနစ်တကျအသုံးပြုခဲ့သည့်အခါဒီထုတ်ကုန်အချို့အန္တရာယ်များနှင့်အသက်အန္တရာယ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်သော်လည်း, ကအံ့သြလောက်အောင်အထင်ကြီးစရာရလဒ်တွေကိုပေးပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောရေတွင်းတစ်တွင်း-ပီပီယန္တရားရှိပါတယ်။ DNP လည်းထိုကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါကုသကဲ့သို့သောအခြားလက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။
DNP အဆီ burner ဆေးပြားသုံးစွဲဖို့ရှာကြံသောအခါ, ရန်အရေးကြီးပါသည်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးမျိုးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်။ ဤသောက်သုံးသောနှင့် DNP ဝက်ဘဝကိုအသိပညာကိုအသုံးပြုပြီး DNP သောက်သုံးသော၏သင့်လျော်သောအချိန်ကိုက်များပါဝင်သည်။ စဉ်းစားရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးအဖြစ်ကောင်းစွာ DNP ဖြည့်စွက်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတိုက်ဖျက်ရေးအဖြစ်ကောင်းစွာသောက်သုံးသောကာလအတွင်း၎င်းတို့၏အစားအစာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းကျွမ်းကျင်သူများထံမှအကြံဉာဏ်ကိုရ DNP ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်, သင် DNP ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးအပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံစေနိုင်ပါတယ်။
1 ။ Bagchi Debasis, Preuss ဟယ်ရီ, G .; အဝလွန်ခြင်း: ကူးစက်ရောဂါ, Pathophysiology နှင့်ကာကွယ်ခြင်း (2007) ။ P.200, p.201, p.212, p.561
2 ။ ဒေဗောရ, Triggle DJ သမား deeugenio Henn Debra, အစားအသောက်ဆေးပြား (2005) p.42
3 ။ Versaw Pam ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း; Submitochondrial အမှုန်များ (2,4) p.1975, p ပေါ် Uncoupler 9-dinitrophenol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။
4 ။ Ledford (ဂျူနီယာ) ရွိုင်း Merl;2များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, ဖားနှလုံးဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ရာထူးအမည် (4) p.1949, p.23, p.25 ပေါ်မှာ 26-dinitrophenol ။
5 ။ Breguet မေီအီး .; အစားအသောက်ဆေးပြား (2008) p.21, p ။ 90 ။
6 ။ Blachford Stacey, Krapp Kristine M က .; မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိန်းချုပ်သောပစ္စည်းဥစ္စာ: ကျောင်းသားများများအတွက်သတင်းအချက်အလက် (2003) p.130
7 ။ Jameson ဂျေလာရီ, De Groot Leslie J ကို .; ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်: လူကြီးနှင့်ကလေး E-စာအုပ် (2005) စ။ 1397
832 Views စာ
Trenbolone Enanthate Powder အကြောင်းအားလုံးအဆိုပါအရာ အင်အားအကောင်းဆုံးခံတွင်း steroids Methasterone (Superdrol) Prohormone
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က on Trenbolone Enanthate အမှုန့်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က on Avanafil အမှုန့်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က on SR9009 အမှုန့်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က on Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့်
Masteron Enanthate အဆိုပါရှည်လျားတဲ့ခေတ္တအန်ဒရိုဂျင်ဟို steroids (AAS)
Masteron (Drostanolone propionate) အကျိုးသက်ရောက်မှု, သောက်သုံးသော, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အင်အားအကောင်းဆုံးခံတွင်း steroids Methasterone (Superdrol) Prohormone
မူပိုင်ခွင့်© 2019 All rights reserved aasraw ။ ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူမှာ www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.phcoker.com